Factory Tour - Nanjing Huade Nchekwa Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Nanjing Huade Nchekwa Equipment Manufacturing Co., Ltd. hiwere na 1993. Anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga na ndị mbụ na-enye ọrụ na-elekwasị anya na imewe, ịgha ụgha, ntinye nke usoro nchekwa akpaaka na usoro ịchekwa nchekwa.
Site n'ịgbalịsi ike nke ndị otu HUADE, itinye ego na R&D na-aga n'ihu, yana nkesa na-ekesa zuru ụwa ọnụ, HUADE sitere na ụlọ ọrụ na-akụ ụfụ wee bụrụ onye na-emepụta ngwa ngwa nchekwa ngwa ngwa na usoro sistemụ. Kwa Afọ ike ike bụ gburugburu 50,000 tọn.
Dị ka akụrụngwa na sistemụ sistemụ, HUADE nwere ndị otu R&D siri ike, ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi. Na ndị mmekọ gburugburu ụwa, HUADE na-agbalite ngwaahịa, teknụzụ na ọrụ iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ. Ngwaahịa niile emere dị ka ụkpụrụ ụlọ ọrụ mba ụwa si dị, ntụgharị ụkpụrụ Euro, FEM, Australia, US.
E nwere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ 5 dị ugbu a na osisi ọhụrụ dị ka ụlọ nyocha. maka ngwa ahịa na ịnwale usoro nchekwa akpaaka.
Enwere ike ịmepụta ụdị dị iche iche nke ngwaahịa na usoro nchekwa akpaaka site na usoro 200 nke igwe na usoro mmepụta, dị ka:
2 mba. nke ígwè shelf mmepụta ahịrị 20 no. nke akpaka punching & mpịakọta-akpụ edoghi maka egwu posts
10 nos. nke akpaka mpịakọta-akpụ edoghi maka ibé 6 mba. nke elu-ọgwụgwọ na akpaka electrostatic ntụ ntụ mkpuchi edoghi
5 mba. nke robotic doo ịgbado ọkụ igwe 2 mba. nke ígwè pallet mmepụta edoghi
60 nos. nke ígwè ọrụ ịgbado ọkụ carbon dioxide 50 nos. nke ịcha, ekwe na ọkpọ ọkpọ igwe
1 nr. nke 500 tọn hydraulic pịa 5 mba. nke CNC machining emmepe
QC:Onye ọrụ ga-enyocha ngwaahịa ọ bụla na ọkwa mbụ, mgbe ahụ, ngwungwu nke ngwaahịa ọ bụla kwesịrị inyocha nyocha nlele.
Ule na nlele fixtures na ngwaọrụ dị, dị ka tensile igwe, nnu spraying tester, micrometers, calipers, elu, n'akuku, ọkpụrụkpụ gauges wdg